အရှိကို အရှိအတိုင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အရှိကို အရှိအတိုင်း
Posted by မောင် ပေ on Jun 26, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 56 comments
သည်ကနေ့ ဦးပုသ်နေ့ ဗျ ။
ကျုပ်တို့ မန်းတလေးမြို့ မှာတော့ ၊ ဦးပုသ်နေ့ ဆိုရင် အလုပ်တော်တော်များများ နားကြ ၊ ပိတ်ကြ တာပေါ့ဗျာ ။ ဆိုတော့က..ကျုပ်လဲအားနေပါရော ။ ဒါနဲ့ လဘက်ရည်သောက်ရင်း အင်တာနက်သုံးရအောင် ဝိုင်ဖိုင်ရတဲ့ ဆိုင် ကို ထွက်လာခဲ့တယ် ။
မနက်ပိုင်းမို့ အင်တာနက်သုံးတဲ့လူ သိပ်မရှိဘူးမှတ်တာ ၊ ဦးပုသ်နေ့ ဆိုတော့ ၊ ဆိုင်မှာ လူအပြည့်နီးပါး ဘဲဗျ ။ တက်ဘလက် တွေ ၊ အိုင်ဖုန်းတွေ ၊ အိတ်တီစီတွေ ဆမ်ဆောင်းတွေ… အို အစုံပါဘဲဗျာ ၊ ကိုယ့်ပါတာလေးနဲ့ ကိုယ် သုံးနေကြတာကလား။
ဒါနဲ့ ဆိုင်ထဲ ဘယ်နေရာလွတ်လဲ တစ်ချက်ရှိုးနေတုန်း…
“ ဟေ့ရောင် မောင်ပေ.. လာ..လာ ဒီမှာ လာထိုင်လှည့် ”
ကြည့်လိုက်တော့ ၊ ကျောင်းတုန်းက ဘော်ဒါနှစ်ကောင် ၊ တစ်ယောက်က တက်ဘလက်ကြီးနဲ့ ၊ တစ်ယောက်ကကြ အိုင်ဖုန်း နဲ့ ။ ကျုပ်လဲ
“ ဟေ့ကောင်တွေ ၊ ဘာတွေကြည့်နေတာလဲ ၊ ချက်ကြီးလား စေတန်လား ”
“ ဘယ်ကလာ အဲဒါတွေက ရိုးနေပြီ ၊ ပလေးဘွိုင်းမှာ လစဉ်ကြေးသွင်းပြီး ရှယ်ခံစားနေတာ ၊ သိပြီလား ၊ ဟားဟား… မောင်ပေ မင်းအခွက်ပြောင်တုန်းဘဲနော ”
“ မင်းတို့ ရဲ့ သူငယ်ချင်းဘဲကွာ ၊ လျှော့လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ..နော ”
“ လုပ်..မှာကွာ ၊ ဘာသောက်မှာလဲ ၊ အဲ..တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ၊ ဒီမှာ အရက်မရောင်းဘူးနော် ”
“ေ-ွးကောင် ၊ လဘက်ရည်ဘဲမှာ မှာ ၊ နက်လဲ သုံးမလို့ ၊ ငါ့ကို ဒီဆိုင်က ပတ်စ်ဝေါ့ပြောဦး ၊ ဒါနဲ့ မင်းတို့ ကြည့်နေတာ..ဘာသတင်းတွေ ထူးသေးလဲ ”
“ ဘာထူးသေးလဲဆိုတော့ ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်က ဖာခေါင်းအိမ် ကို တိုင်စာပို့ ထားတဲ့ သတင်းကို ဖရီးဒန်းနယူးမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် ”
“ ဟေ့..အဲဒါ မင်းတို့ နဲ့ ဘဲ ဆိုင်တာလေကွာ ၊ ငါမေးတာက ပြည်တွင်းသတင်း စီးပွားရေး ဘာညာ ”
“ သစ်ထူးလွင်မှာဖတ်ရတာတော့ ၊ မြတ်ခိုင် ကို အာမခံပေးလိုက်ပြီတဲ့ ၊ ကိုမင်းကိုနိုင် က သရက်ပင်ချောင်းရွာက လယ်သမားတွေ နဲ့ သွားတွေ့ ခဲ့သတဲ့ ၊ ဦးသိန်းစိန်က လူမှုကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာ လိုအပ်နေတယ်တဲ့ ”
“ မင်းတို့ က သစ်ထူးလွင်ဘဲ ဖတ်တာလား ”
“ အီလဲဗင်း တို့ ၊ ဖရီးဒန်းနယူးတို့ လဲ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ”
“ မင်းတို့ မန်းတလေးဂေဇက် ကို သိလား ”
“ သိသားဘဲ ၊ အရင်တုန်းကတော့ဖတ်ဖြစ်တယ် ၊ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းတော့ မဖတ်ဖြစ်တော့ဘူး ”
“ ဟင်..ဟုတ်လား ၊ ဘာလို့ ဆက်မဖတ်ဖြစ်တော့တာလဲ ၊ ပြောစမ်းပါဦး ”
“ အရင်တုန်းက ဖတ်တယ်ဆိုတာက ၊ အဆိုတစ်ခုရှိလာပြီ ဆိုရင် အဲဒါကို ဝိုင်းငြင်းနေကြတာ.. ဟိုကွာ…ရပ်ကွက်တွေထဲမှာ ဟိုဘက်ဒီဘက် အစုလိုက်ကြီးရန်ဖြစ်နေတာ ကို ဘေးကကြည့်ရသလိုမျိုး..အရသာတော်တော်ရှိတာကွ ၊ နောက်ပြီး ဖတ်ရတဲ့စာလေးတွေကလဲ ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင် ကိုယ်ပိုင်အရေးအသားလေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကွာ ၊ အပြင်မှာ လက်ရှိရေးနေတဲ့ စာရေးဆရာတွေ နဲ့ ကဗျာဆရာ တွေ ရဲ့ လက်ရာတွေ လဲ ဖတ်ရတယ်ကွာ ၊ တစ်ချို့ ကြတော့လဲ နိုင်ငံခြားကရေးတာထင်တယ် ၊ သူတို့ ရောက်နေတဲ့ဆီက အနေအထားလေးတွေ ၊ တစ်ချို့ ရေးတဲ့သူတွေ ဆိုရင် တစ်ကယ့်ကို ဆရာကြီးတွေဘဲ.. နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲ ၊ နည်းပညာပေးဆောင်းပါးတွေ ၊ တို့ ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ကောင်းဖို့ အကြောင်းတွေကို ကျကျနန အသေးစိတ်ရေးပေးထားတာကွ ၊ သတင်းတွေလဲအစုံဖတ်ခဲ့ရတယ်ကွာ ၊ အဲ..အင်္ဂလိပ်စာလဲ သင်ပေးသေးတယ်ကွ ငါတောင် အဲဒီ အင်္ဂလိပ်စာအီဒီယမ်သင်ပေးတဲ့ စာဆို စတစ်ထဲ ကူးနေကြဘဲ ၊ အခုကြ.. တစ်ခါလာလဲ ဂျာနယ်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ ထည့်ပြီးသား ဖတ်ပြီးသား ဟာသတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဘဲ ရေးထားတာလိုလို ၊ တစ်ချို့ စာတွေဆိုရင် ကွန်နက်ရှင်မှမကောင်းတဲ့ကြားက အဲဒီစာကို ရောက်ဖို့ loading တက်တာကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်မိပါတယ် ၊ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ ၅ကြောင်း ၆ ကြောင်းလောက် ဘဲ ပါလာတယ် ၊ ဆိုတော့ကွာ အဲဒါမျိုးတွေချည်းထပ်နေတာ ဖတ်ရပါများတော့… ငါတို့ က အားယားလို့ အင်တာနက်သုံးတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ ၊ ဒါပေမယ့် အားလို့ ရတဲ့အချိန်ခဏလေးမှာ အင်တာနက်သုံးပြီး စာဖတ်တဲ့အခါ ၊ တစ်ခုခုတော့ ရချင်မိတာပေါ့ ၊ အဲဒါပါဘဲကွာ ”
“ ဒါနဲ့ ..အခုမှ သတိရတယ် ၊ ငါတို့ ဂေဇက်မှာ ဖတ်တုန်းက မောင်ပေ မောင်ပေ နဲ့ ဆိုတာ ကို တွေ့ ခဲ့ဖူးသလိုဘဲ ၊ အဲဒါ မင်းလား မောင်ပေ ”
“ မင်းက ဘယ်လို ထင်လို့ လဲ ၊ ဟဲဟဲ ”
“ မင်းဘဲဖြစ်မှာပါကွာ ၊ မင်းက ပြောင်ပြီးသားကောင်ဆိုတော့ ၊ လိုက်ပြောင်နေတာဘဲ ဖြစ်မှာ ”
“ အသာလုပ်ပါငါ့ကောင်ရာ ၊ ငါလဲ စာရေးတာဝါသနာလေးနဲနဲပါလို့ ၊ အရင်တုန်းက စတိုင်းယားလေးတွေ နဲ့ ရသလေးတွေ ရေးဖြစ်တာပါ ၊ နောက်ပိုင်းကြ လိုင်းတွေပူးပြီး.. ပရီးမီးယားလိဂ် တို့ စီးရီးအေ တို့ ဥရောပ ကလပ်ပွဲတွေ အကြောင်းတွေ ဘက် ရောက်သွားတာ ”
“ ဒါဆို မင်းက ခန့် မှန်းချက် ရေးတာပေါ့ ၊ ဘောလုံးဂျာနယ်တွေလို ”
“ ဟုတ်တယ်..ဒီကောင်ရေးတာဖတ်ဖူးတယ် ၊ အဲ့တုန်းက ၁ပွဲမှန် ၂ ပွဲမှား ၊ နောက်တစ်ခါထပ်ဝင်ကြည့်တော့ ၂ ပွဲမှန် ၁ ပွဲမှား ၊ ဒီကောင်ဘယ်ကနေဘယ်လို အကြားမြင်ရလဲ မသိဘူး ”
“ အကြားမြင် ရတာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ ၊ အဲဒီလို ရေးတင်နိုင်ဖို့ ၊ ဘောလုံးဝက်ဆိုက်ပေါင်း ၁၃ ခုလောက်ကနေ အချက်အလက်တွေလိုက်ရှာ ၊ ကိုယ့်စာဖြစ်အောင် စုတုပြု ၊ အာရှဘူကီဈေးတွေနဲ့ ၊ သည်ကဈေးတွေ ယှဉ်ပြီး ၊ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတဲ့အကြောင်း ကို ရေးခဲ့တာပါဟ ”
“ အေးပေါ့လေ.. မင်းကတော့ မင်းဟာနဲ့ မင်းကိုး ၊ ငါတို့ တော့ မန်းတလေးဂေဇက် ကို ဖတ်ချင်စိတ် ဖီးလ်သိပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး ”
“ လာဖတ်ပါဟ ၊ မင်းတို့ ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ၊ တို့ ဆိုက် က သဂျီးက အလုပ်များနေလို့ ၊ မစီစစ်နိုင်သေးလို့ ပါ ၊ နောက်ပြီး ဆိုက်ထဲက လူဟောင်းတွေကလဲ သိပ်မပြောကြဘူး ၊ လူမုန်းများမှာ စိုးလို့ ထင်ပါတယ်ကွာ ”
“ အေးအေး..ကြည့် ကြည့်ဦးမယ်လေ ၊ ထားပါတော့ ၊ မင်းလဲ လဘက်ရည်သောက်လိုက်ဦး ၊ တို့ လေပေါနေတာနဲ့ မင်း လဘက်ရည်က အေးနေပြီ ၊ ဒါနဲ့ ယူရို၂၀၁၂ ဆီမီးဖိုင်နယ် မင်းဘာကြိုက်လဲ ၊ မင်းရေးတင်ဦးမှာလား ”
“ လောလောဆယ်ကြိုက်တာတော့ ရှိတာပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့် ကန်မယ့်နေ့ ကြမှ ထွက်တဲ့ဈေးကို ကြည့်ပြီးမှ ဘယ်အသင်းနိုင်လောက်တယ် ဆိုတာ ကို ခန့် မှန်းလို့ ရမှာကွ ”
“ မင်း စတိုင်ယားတွေရေးတယ်ဆို ၊ အဲဒါ မရေးတော့ဘူးလား ”
“ အခုနောက်ပိုင်း ပြန်ရေးဖြစ်တာလေးတွေ ရှိတယ် ၊ ဒါပေမယ့် မတင်ဖြစ်သေးတာ ၊ ရခိုင်ကိတ်စ ပေါ်လာတော့ ၊ ကြားရတဲ့ ဖတ်ရတဲ့ သတင်းတွေအပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မလို့ ၊ မရေးဖြစ်တာကွ ”
“ အေးကွာ..ငါ့သယ်ချင်းက စာရေးတယ်ဆိုမှတော့ ၊ ငါတို့ ကြုံရင်ကြုံသလို ဝင်အားပေးပါမယ်ကွာ ”
“ အေးပါကွာ ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ လောလောဆယ် လဘက်ရည်ဘိုး ငါရှင်းခဲ့မယ်နော် ၊ နောက်မှတွေ့ မယ်ကွာ ”
သို့ နှင့် ကျုပ်လဲ သူရို့ နဲ့ ပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ ကို စာတစ်ပုဒ်လောက် ကောက်စီကြည့်မလားလို့ ၊ စဉ်းစားရင်းနဲ့ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ပြီး အခုလို ရေးဖြစ်သွားတာပါဘဲ ။
ကျုပ်ရေးတဲ့စာအတွက် ကျုပ် ကို မုန်းကြလဲ မုန်းကြပါစေ ။
ကျုပ် နဲ့ လူတော်တော်များများ ပျော်ရွှင်နေသော နေရာလေးကိုတော့ မပျက်စီးစေချင်တာ ၊ အောက်မကျစေချင်တာ ၊ လူကဲ့ရဲ့ စရာ မဖြစ်စေချင်တာ ၊ ကျုပ်ရဲ့ စေတနာအမှန် ပဲမို့ ၊ အရှိကို အရှိအတိုင်း ရေးပြလိုက်ပါတယ်ဗျား ။
သေ ပီ ဟေ… အူးပေ… ထစ် ခနဲ ဆို facebook က ကူးပြီးတင်တင်နေတဲ့ ကြောင်းရော မပြော ကြ ဘူးလား… facebook များစွယ်စုံ ကျမ်းလို မှတ် ပြီး ကူးကူးတင် ရတာ အမော…
ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ် ဦးပေ ပြောတာလဲ မှန်ပါတယ် နောက်တက်လာတဲ့သူတွေကလဲ မလုပ်တတ်မကိုင်တတ်တော့မျောက်မီးခဲကိုင်မိသလို ဟိုစမ်းဒီစမ်းလုပ် နေကြတာဆိုတော့လဲခုတော့သီးခံပေးလိုက်ပါ ဦးပေရယ် မမှန်သတင်းတွေကိုလဲ ဂေဇက် မှာမတင်စေချင်ပါဘူး ပြသာနာသယ်လာမယ့်ပိုစ်တွေကိုလဲမတင်စေချင်ပါဘူး အားလုံးကို လေးစါးလျှက်ပါ
“လေးစါး” ကို ဒီလိုလေး “စား” လိုက်ပါလားဗျာ နော့
ကျန်သေးတယ်ရှင့်…. လျက် မှာ ဟထိုးမပါပါဘူးရှင်…
( “ မင်းတို့ မန်းတလေးဂေဇက် ကို သိလား ” )
သူများတွက် ဘယ်လိုနေမလဲ မသိပါဘူး ကျုပ်အတွက် စိမ်ခေါ်မှု့တစ်ခုပါဘဲ
ဂေဇက်ဆိုတာကို တည်ထောင်တဲ့ သဂျီးကို ဘေးချိတ်ထားပါမယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂေဇက် ခရေဇီ တစ်ယောက်လို့ မှတ်ယူပါတယ်
ညီမငယ် မနောဖြူလေး ရေးတဲ့ ပိုစ့် တစ်ခုရှိခဲ့ဘူးပါတယ် ဂေဇက်ကို သိကြပါသတဲ့
ကျုပ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာဘူးပါတယ် သူတို့ မသိကြပါဘူး
စကား ( နောက် ) တရားပါ ကျုပ် ပိုစ့် တစ်ခုမှာ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ် ထပ်မပြောလိုတော့ပါဘူး
မန်ဘာတွေအနေနဲ့ မာနတွေကို ဘေးချိတ်ထားကြဘို့ ကျုပ် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်
ဒီနေရာမှာ ကျုပ်က ဖေတော့ မောင်တော့ ဆဲရေးတိုင်းထွားတာကို ဒီနေရာမှာထားခဲ့ပါ
တစ်ခုသောနေရာမှာ သဘောလွဲသွားတာကို ဘဝတစ်ခုလို မခံယူကြပါနဲ့
အခြားနေရာမှာ ကျုပ်က ကောင်းရာကောင်းကြောင်း ပြောလာရင် ပြေလည်အောင်ဆွေးနွေးကြပါ
( အခြေနေကြည့်ပြီး ဆက်ရေးပါအုန်းမယ်ဗျာ )
ဟိုဘက်မှာ ခခွီး ဆိုလား။
ဦးပေ ရေးတာလေး ကောင်းပါတယ်ရွာကြီးကရသစုံရွာကြီးဖြစ်သင့်ပါတယ် အနော်တို့ကရေးတတ်ဘူး ဖတ်မယ် မန့်မယ် ဒါပဲ
တစ်ဆယ်ယူပီး လစ်မယ်ပေါ့လေ…… :grin:
ဒါပေသည့် မောင်ပေ ထောက်ပြ သလို ဘဲ အဖြစ် ရေးနေတဲ့ Post လေး တွေ ကို တော့ သတိပေးသင့်တယ်။
စာလုံးရေ ဘယ်လောက် ဖြစ်မှ Post တစ်ခု ဖြစ်မယ် ဆိုတာလေး။
Word Count လုပ်ပြီး စစ်လို့ ရမယ်ထင်ရဲ့။
ကော်ပီ ဆိုရင် ကော်ပီ လို့ ခေါင်းစဉ်တပ် သင့်သလား။
ဒီလိုဆို ကော်ပီ မဖတ်ချင်ရင် ဝင်မဖတ်တော့ ဘူးပေါ့။
အခုတစ်လော Post တွေ များ လာတာ တော့ ကောင်းပါရဲ့။
အကျိုးရှိတာလေး တွေ ဆို ပိုကောင်းမှာပါ။
မောင်ပေ ပြောတာ ကို အားပါးတရ ထောက်ခံသွားပါတယ်။ :-)
ဘရာကြော်၊ ငှက်ပျောကြော်၊ ပုဇွန်ကြော်၊ မန္တလေးပဲကြာ် (စားချင်တာလေးတွေ အပို ထည့် ပေးလိုက်တာ)
ဒီဆိုက်က လွတ်လပ်စွာရေး တင်ချင်တာတင် ဆိုတဲ့ဆိုက် ဆိုတော့
ပိုစ့်တွေ ကို ဝေဖန်တဲ့ တယောက်/တဖွဲ့ တော့ ရှိသင့်တယ်…
ဘယ်လို ဝေဖန်တဲ့လူမျိုးလဲ ဆိုတော့
အရင်က ရုပ်ရှင်တွေကို ဝေဖန်တဲ့ ဆရာ စိန်ခင်မောင်ရီ ….. လိုမျိုးပေါ့..
ဦးပေရေ. ဦးပေရဲ့ စေတနာ ကိုမြင်ရပြီးလူဇိုးဝင်လုပ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဒါပေမဲ့ ဦးပေရေ. စိတ်ရှည်သည်းခံပေးဖို့ လိုမယ်လို့လည်းထင်ပါသည်။
တစ်ဘက်ကလည်း ထိန်းကျောင်းပေးရင်း ဦးပေတို့ ကိုဂီတို့ ဆရာသစ်မင်းတို့လို လူများလည်း စိတ်မပျက်ဘဲ ဆက်လက် ရေးပေးနေရင် ရွာကြီး ပိုသာယာလာမယ်လို့လည်းထင်ပါသည်။
ဖတ်နေကျ လူတွေဆို ကြာလာရင် ဘယ်သူ က ဘယ်လိုစာရေးတတ်လည်းသိလာပြီး ရွေးဖတ်ကြမှာပါ။
လူသစ်တွေ အနေနဲ့ ကစ၀င်စဆိုတော့ ရေးချင် တင်ချင် လက်သွေးချင် စမ်းချင် ကြမှာပါဘဲ ။ အဲဒါကို သဘာရင့်နေသူများ ကို ထိန်းပေးသွားရင် သူတို့တွေလည်း အခြားသော မသင့်လျော်သော နေရာတွေမှာ မပျော်မွေ့တော့ဘဲ မန္တလေး ဂေဇက်မှာ ပျော်မွေ့လာရင် ပိုမကောင်းဘူးလားဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ ရွာသက်ရင့်သူေ၇းနိုင် ရေးတတ်သူများ စိတ်မပျက်ဘဲ ရေးရင်း ထိန်းကျောင်းပေးစေချင်မိတယ်။ အန်တီမမ ၊ မွန်မွန်တို့လို သတ်ပုံ အဖွဲ့ကလည်း သတ်ပုံလေးတွေ ပြင်ပေးရင်းနဲ့ပေါ့ ။
သူကြီးကတော့ ဘယ်လို သဘောထားပြီး ဒီဆိုဒ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့လည်း မသိပေမဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဒီဆိုဒ်က လူငယ်တွေ လူကြီးတွေ သဘောထား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေး ဝေဖန် ၊ ဝေဖန်ဆွေးနွေးတဲ့ အကျင့်၊ သည်းခံ တတ်တဲ့အကျင့် ၊ လွတ်လပ်ခွင့်တစ်ခုကို ကိုယ့် အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ ကိုယ် ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့ အကျင့်ကောင်းလေးတစ်ခု ဖြစ်စေခြင်တာတွေ ပါနေမလား တွေးမိပြီး နှစ်ခြိုက်နေမိပါသည်။ အဲ့ဒီ့ အနှစ်သာရကို မမြင်ဘဲ အပေါ်ယံနဲ့ ကဲ့ရဲ့ရင်လည်း ပြုံးနေပေးလိုက်ကြရအောင်လားဦးပေရေ.
အခုလည်း ဦးပေက စေတနာနဲ့ ထိန်းကျောင်းပေးခြင်းတစ်ခုမို့ မုန်းစရာ အကြောင်းမမြင်ကြောင်းပါ ။
ဘရာကြော် ပါ ဦးပေ။
“ကွန်နက်ရှင်မှမကောင်းတဲ့ကြားက အဲဒီစာကို ရောက်ဖို့ loading တက်တာကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်မိပါတယ် ၊ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ ၅ကြောင်း ၆ ကြောင်းလောက် ဘဲ ပါလာတယ်“
အဲဒါတော့ထောက်ခံတယ် ကပေ့ရေ။ တခါတခါများ ၄ ခါ ၅ ခါလောက်ဖွင့်မှ ပိုစ့်ပွင့်လာတာ။ ပြီးတော့ဘာမှ လဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ တခြားပိုစ့်တွေဖွင့်ချင်စိတ်ပျောက်သွားရော။ လက်မအကြီးကြီးထောင်သွားပါ၏။
ဂေဇက်မန်ဘာ အတော်များများမှာဒီလို အမြင်တွေရှိနေကြမှာပါ…
ရည်ရွယ်ရေးထားသူများထဲက ဒီ Post လေးဖတ်မိပြီး
ဗဟုသုတ ရတာလေးတွေ များရင်
ပြီးတော့ ဦးဦးပါလေရာပြောသလို့ အဖွဲ့တစ်ခုထားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်
ဟုတ် .. ကိုပေ အသစ်ကလေးသေချာမှတ်ထားပါ့မယ်
စာလေးငါးခြောက်ကြောင်းနဲ့လည်း ပို့စ်တစ်ပုဒ်မရေးတော့ပါဘူး ..
ကိုရင်ပေ ကိုအပြည့်အ၀ထောက်ခံ၍ လက်မကြီးကြီး(ရဲဘော်ဘလက်ဆီက
အပေါ်တက်သွားတော့ လက်မရှာမတွေ့ပါဂျောင်း..ဆောရီးပါ ကိုပေရေ..
အဖွဲ့  နဲ့ ဝေဖန်ကြမယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်
စိတ်တော့ မဆိုးကြေးပေါ့ဒါမှဒီဆိုက်ကို ဝင်ပြီးနှေက်ယှက်အသုံးချတဲ့ သူတွေ
နဲသွားမှာ။အဖွဲ့ ထဲမှာပါစေချင်တဲ့ သူတွေကတော့ အများကြီးပါပဲဒီထဲကတချို့ ကို
ရွေးရင်တော့ကိုအောင်ပု နိဂိမိ ကိုကြောင်ကြီး ဦးဖေါရင်း ကိုပေါက် မမ ဆူး အိတုန်
ကိုဘလက်ချော အရီးလတ် တီချယ်နု ဦးပါလေယာ ကိုနေဝန်းနီ ကိုကမ်း
ကိုပေကိုတော့ ပို့ စ် စရေးလို့ဝေဖန်ရေးအဖွဲ့ ထဲမထဲ့ တော့ ပါဘူး
အမှန်တော့ပါသင့် သူတွေ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်
ရွာထဲနေတွ့ နေကျသူတွေထဲက ပြောလိုက်တာ
ဘာသာရေးပို့ စ်များအတွက် ဆရာတော်များလဲပင့် ဖိတ်ချင်ပါတယ်
ကျွှန်တော်က ဒီဂေဇက်ကို ၀င်ဖတ်နေတာတော်တော်ကြာပါပြီ..ရွာသူားအားလုံးနီးပါး ကိုလည်းလူမမြင်ဖူးတောင် နာမည်တွေကရင်းနှီးနေပါတယ် …
ပိုစ့် တွေ ကွန်မန့်တွေတော့ သိပ်အများကြီးမရေးဖြစ်ဘူး ..ဘာဖြစ်လို့မရေးဖြစ်တာလဲဆိုတော့
“””4. အခြားမီဒီယာ၊ Websiteများ၏ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ၊ forwarded email မှစာများ (မူရင်းအစစ်အမှန်ကို ညွန်းဆိုခြင်းမရှိပဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်မထည့်ပဲ)တိုက်ရိုက်ကူးတင်ခွင့်မရှိ”””
“””12. Post/Comment တို့ကို စာဖတ်သူတို့အတွက် အကျိုးရှိ/ကျန်ရစ်စေမည့် စာများသာရေးကြပါရန်။ “””
အဲဒီ အချက်တွေကိုလိုက်နာသောအားဖြင့် ကွန်မန့်လေးရေး ပြီးမှပြန်ဖျက် ,ပိုစ့်လေးရေးပြီးမှ ပြန်ဖျက် အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ဘာမှသိပ်မရေးတော့ ပွိုင့်မရ ရာထူးမတက် လူမသိ မထင်ပေါ် ဖြစ်ရတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ..
ဒါပေမယ့် ..ဒါက အရေးမကြီးဘူး..ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂေဇက်ရွာသားတစ်ယောက်အဖြစ်(ဘယ်သူအသိအမှတ် ပြုပြု မပြုပြု) ဂုဏ်ယူစွာ နေ့စဉ် ၀င်ဖတ်မြဲ မပျက်ကွက်ပါ..
ကိုပေ ပြောသလို အရည်မရ အဖတ်မရ ပိုစ့်တွေ ကွန်မန့်တွေလဲ အများကြီးတွေ့နေပါလျှက်နဲ့လည်း စိတ်ပျက်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး…
ဒါပေမယ့်…ခုတလော နဲနဲတော့ စိတ်ပျက်သလိုလို အားငယ်သလိုလို လေးတော့ခံစားရပါတယ်
အကြောင်းရင်းကတော့ တချို့ပိုစ့် ၁ခု ၂ခု မှာ ကိုယ်ကခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးအားတက်တရော ၀င်ဖတ်လိုက်တယ်… (Rules) ဆိုတာကြီးက ပေါ်လာတယ်…၀င်ဖတ်လို့မရဘူး…
ကိုယ်ထင်လိုက်တာက ဒါ သူကြီးက ပိတ်ထားတယ်ပေါ့လေ…
ဒါပေမယ့်…အဲဒီပိုစ့်မှာ ကွန်မန့်တွေက တိုးတိုးလာတော့ ကိုယ်ကသာ ဖတ်လို့မရတာ ရတဲ့သူတွေကရတယ်ဆိုတော့ သိလိုက်တာက ..အော်….ဂေဇက်မှာလဲ VIP ရှိတာပါလားလို့ အားငယ်မိသွားပါတယ်…
ပွဲအရမ်းကြမ်းသွားမှာ စိုးလို့ ပိတ်လိုက်တာ ထင်ပါရဲ့ 
ခင်ဗျားပြောတဲ့ ပို့ စ် ကို ကျုပ်လဲ အရမ်းသိချင်လို့ ၃ ၄ ခါလောက် ဝင်တယ်
ရူး ဘဲ မြင်ရတယ်။
ကိုပေပြောတာ လက်ခံပါတယ် ကျွှန်တော်က ငိုချင်လျှက်လက်တို့ ဖြစ်နေတာပါ
ဒါပေမယ့် ကွန်မန့်တွေက တိုးတိုးလာတယ်ဗျ…
စကားမစပ် ဟွန်းတီးထားတဲ့ ကိစ္စ ကြုံရင် လက်ဖက်ရည်တိုက်မယ်နော်..
ကြည့်ရတာ ကို/ဦး ငပွကြီးက log in မလုပ်ပဲဖတ်လို့ထင်ပါတယ် ..
မိုးဇက်ရေ log in ၀င်ပြီးမှဖတ်ရင်ရတယ်ဗျ…
ကျွှန်တော် အထင်လွဲမိတာကို သူကြီးအပါအ၀င် အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်…
ံHome မှာ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်၊ ရေးသူအမည် နဲ့ Tag ပေါ်သလို.. Category ထည့်ထားတာကိုလည်း ပေါ်အောင် လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကော..
ကော်ပီ/ပေ့စ် ဆိုတာ မြင်ရင် မဖတ်ချင် ကျော်သွားလို့ရတယ်
politic, Satire, Act, Joke တခါတည်းပေါ်နေရင် စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပို့စ်ဝင်ဖတ်ပေါ့..
စ၀င်ကာစ ရွားသူားအသစ်တွေလည်း မြေစမ်း ခရမ်းပျိုးသလို လုပ်ကြရင်း ပို့စ်တွေတင်ရင်း ရွာသက်ရင့်တဲ့သူတွေက ဖေးမသွားကြတာပေါ့.
သြော်.. လက်မလေး ထောင်ခဲ့တယ်နော်.. ကပေ့
တစ်ပုဒ်ကို အေဖိုး၂ရွက်စာ ရှိရမယ်ဗျာ
“”ကိုပေ ပြောသလို အရည်မရ အဖတ်မရ ပိုစ့်တွေ ကွန်မန့်တွေ”” ဆိုတာက
“”အခုကြ.. တစ်ခါလာလဲ ဂျာနယ်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ ထည့်ပြီးသား ဖတ်ပြီးသား ဟာသတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဘဲ ရေးထားတာလိုလို ၊ တစ်ချို့ စာတွေဆိုရင် ကွန်နက်ရှင်မှမကောင်းတဲ့ကြားက အဲဒီစာကို ရောက်ဖို့ loading တက်တာကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်မိပါတယ် ၊ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ ၅ကြောင်း ၆ ကြောင်းလောက် ဘဲ ပါလာတယ် ၊ ဆိုတော့ကွာ အဲဒါမျိုးတွေချည်းထပ်နေတာ ဖတ်ရပါများတော့… ငါတို့ က အားယားလို့ အင်တာနက်သုံးတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ ၊”””
ဆိုသော စာပိုဒ်ကို ရည်ညွန်းခြင်း ပါခင်ဗျာ….
မန်းလေးဂေဇက် က ခလေးတွေ ရည်းစားစာ ရေးလေ့ကျင့်ကွင်းကြီး ဖြစ်နေဘီ လို့
စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံ တောင် မှန်အောင်မရေးနိုင်..
ဖတ်တဲ့သူတွေအတွက် ဘာမှန်းမသိ ဘာမှနားမလည်..
ကွန်မင့်ရေးတော့လဲ ဖတ်သွားပါတယ်တဲ့ အားပေးသွားပါတယ်တဲ့ လာထား ၁၀ ဆိုတာလဲပါသေးရဲ့
သဂျီးက အမေရိကားမှာ ထီပေါက်ထားတယ် ဆိုလား
စီအိုင်အေ က စပွန်ဆာပေးထားတယ် ဆိုလား
မန်းဂေဇက်မှာ အာလကေ ပြန်ဝေပေးနေတာဆိုတော့
ကျုပ် လဲ ရောတိရောရာ ကိုယ်လဲပါ ဖြစ်ရတော့မှာပေါ့
ကိုပေရေ အတွေးနဲ.အရေးကိုလဲ အရမ်းခိုက်ပါကြောင်း…..ပြောချင်ပါတယ်…
ကိုပေပြောလိုတွေ ကို စိစစ်ဖို. ဦးဦးပါလေရာပြောသလို ဖြစ်လာမှာပါ….
အခုလို ရွာအတွက် စေတနာရှေ.ထား..ပြောတာကောင်းတယ်ဗျာ..
မှားတယ်ဆိုရင်တောင် ကိုပေပြောသလို စေတနာအမှားပဲဖြစ်မှာပါ….
ကွန်မန့် ၅ ကြောင်းရဖို့အရေး မနည်းမန့်ရတယ်..
မုန်းမှာကြောက်လို့ ပြောသင့်တာကို မပြောရင် …ဘယာဂတိ။ အဂတိတရားပဲ မကောင်းဘူး။
သီလလိုပြောရရင်…. မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ..ကို ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာက မဟုတ်မမှန်တာကို မပြောတာ။ ဒါဆို သီလပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ကြတာ။ တကယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။
မုသာဝါဒ ဝေရမဏိ..ဆိုတာ မဟုတ်တာ မပြောတာရယ်။ ဟုတ်တာကို ပြောတာရယ်။ ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံမှ သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရမယ်။
သူများအသက်မသတ်ရုံနဲ့ သီလမပြည့်စုံဘူး။ သူ့များအသက်ကို ကယ်ရမယ်။
သူများဥစ္စာ မခိုးရုံနဲ့ သီလမပြည့်စုံဘူး။ သူများပစ္စည်း အခိုးမခံရအောင် စောက်ရှောက်နိုင်ရမယ်။
သူ့သားပျိုးကို ကိုယ်တိုင်မစော်ရုံနဲ သီလမပြည့်စုံဘူး။ အစော်ကားမခံရအောင် စောက်ရှောက်ရမယ်။
လိမ်မပြောရုံနဲ့.. သီလမပြည့်စုံဘူး။ မှန်တာ ဟုတ်တာကိုလဲ ပြောရဲရမယ်။
ဦးပေပြောတာ သိပ်မှန်တယ်။ လိုင်းမကောင်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆို ပိုးဆိုးသေး။ အားထုတ်ပါးထုတ်ဖွင့်လိုက်တာ … ပေါက်လဲသွားရော….ပေါက်သွားတာဘဲ။
ငါးပါးသီလအကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှင်းပြပေးလို့ ကျေးဇူးကြီးလှကြောင်းပါ အူးဘဇင်း
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကပေ။ လိုက်နာနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။
ဘော်ဒီလှပ ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ ဆိုပြီး
အမှန်က မဒမ်ပေလို မော်ဒယ်ဂဲတွေကမှ ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုး ရေးတင်သင့်တာပါ။
ဒီက ပေါင် ၂၀၀ လောက်ရှိနေတဲ့ဟာ ဘယ့်နှယ့်ပြောလိုက်တာပါလိမ့်
ထိပ်တင်ပြောင်တယ်မှတ်နေတာ နှာခေါင်းကလည်း မီးညှိလို့ ရလောက်တယ် [:p]
4. Learn-how-to-do-3 ကိုဖတ်ပြီးမှတင်စေချင်ပါတယ်
တခါနှစ်ခါကတော့ ထားပါတော့ သုံးခါ လေးခါကျတော့ နည်းနည်းလွန်လာတယ်
၅ ခါ ၆ ခါကျတော့ ဆဲချင်လာတယ်
နောက်ဆုံးတော့လည်း ဒီဖရဲဘဲ လူမိုက်လုပ်ရတာဘဲ
ရင်းနှီးတဲ့ စာသားတွေကို မြည်းစမ်းချင်ပါတယ်ဗျာ…
ဦးပြောင်ကြီးရေ ……. နောက်ဆိုသများလည်း စာတွေကို များများလေးရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ် …….
မကောင်းတာကိုလည်း ပြတ်ပြတ်သားသားဝေဖန်ပါမယ် ကောင်းတာကိုလည်း ကောင်းကောင်းထောက်ခံပါ မယ် ရန်ဖြစ်စရာ ဝေဖန်စရာများရှိရင်လည်း မရှက်မကြောက် အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ဝေဖန်ပြောဆိုပါတော့ မယ်ချင့် ……….
ရွာသား ၁ – သူကြီးက သူကြီး အလုပ် မလုပ်တော့ ဦးပေက ၀င်လုပ်ပေးနေရတယ်
ရွာသား ၂ – ဒါက ဒီမိုကရေစီ အလေ့အကျင့်တွေ ရအောင် သူကြီး က လေ့ကျင့်ပေးနေတာ
သူကြီးက အမြဲ သာ ၀င်ပြောနေရင် တခြား လူတွေက တစ်ခုခု ဆို သူကြီး ပြောလိမ့်မယ်
ငါတို့ နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ဖြစ်ကုန်ကြတော့ မှာပေါ့ အခု ဆို ငါ တို့ ရွာလေး ကောင်းအောင် ငါ တို့
၀ိုင်းထိန်းပေးရမယ် ဆိုပြီး ဦးပေ က ဆွေးနွေး ရွာသားတွေက ၀ိုင်းအကြံပေးနဲ့
ရွာသား ၁ – မင်း ပြောသလို ဟုတ်တုတ်တုတ် ပေမဲ့ သူကြီးကလဲ ဟို ဟာ မလုပ်ရ ဒီ ဟာ မလုပ်ရ နဲ့
စည်းကမ်း အမျိုးမျိုး ထုတ်ပြီး အနီ တွေ အပြာတွေ နဲ့ အရောင်တောင် ခြယ်ထားသေး အဲဒီ
စည်းကမ်း တွေ မလိုက်နာတော့လဲ ဘာ မှ မပြောပါဘူးကွာ ငါတို့ မြန်မာပြည် အစိုးရလိုပါပဲ
စည်းကမ်း ဆိုတာ စာရွက်ပေါ်မှာ ရှိတာပါ
ရွာသား ၂ – ဒါကတော့ ဟို စကားပုံ လို တင်းလွန်းရင်ပြတ် လျော့လွန်းရင် ပတ် ဆိုတာလို မဖြစ်အောင်
ရွာသား ၁ – ငါ တို့ ဆီ မှာကွာ ကားသွင်းတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပေါ်လစီ ခဏ ခဏ ချိန်းတယ်
ဆိုပြီး အော်လိုက်ကြတာ အလဲဗင်း က အဆိုးဆုံး ရွာထဲမှာတော့ ပွိုင့်ပေးတာရော တခြား
ကိစ္စတွေရော တရက် နှစ်ခါလောက် သူကြီးက ပေါ်လစီ ပြောင်းနေတာ ဘယ်သူမှ ဘာမှ
ရွာသား ၂ – အဲဒီလို ကြီး ခဏခဏ ချိန်းတာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ကွာ လုပ်ကိုင်ရ ခက်ခဲတာပေါ့
အလဲဗင်း က ပိုအော်မှာပေါ့ ကွာ ပေါ်လစီ အပြောင်းမှာ ကားစလစ် ၀ယ်ထားတာတွေက
ပိုက်မိသွားတာကို မင်းလဲ ပွိုင့် ပေါ်လစီ ပြောင်းလို့ တစ်ခုခု တော့ ထိခိုက်နေပြီ ထင်တယ်
တကယ်တော့ သူကြီး ကိုယ်တိုင် ပြောဘူးတာ ရှိပါတယ် အမေရိကန် ဆိုတာ စာရွက်ပေါ်မှာ
နံပါတ်ရိုက်ပြီး ဒေါ်လာထုတ်ရင်း ကမ္ဘာကို ချုပ်ကိုင်ထားတာတဲ့ သူကြီးလဲ ဒီ သဘောပါပဲ
ရွာသား ၁- ……………
ရွာသား ၂- ………………
သဂျီးက ပွိုင့်၁သိန်း ကို ဒေါ်လာအတု နဲ့ ရှင်းမယ့်အနေအထားရှိတယ် ဆိုတဲ့ သဘောလားခင်ဗျ ။
ဘိုနို့ ကြည့်ရတာ ၊ ကားစလစ်တုန်းက ထိခဲ့ပုံ ရတယ် မှတ်တယ်ဗျာ ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရွာသားအချင်းချင်း ၊ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး လူမှုစီးပွားကိတ်စ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ လို့ မေတ္တာပို့ လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ ။
ကျွန်တော် မောင်ပေ ရဲ့ ပို့ စ် ကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသူ အားလုံး
ကွန်မင့်များဖြင့် အားပေးကြသော ချစ်မိတ်ဆွေ ညီငယ် ညီမငယ် အကို အမ အန်ကယ် အန်တီ များ အားလုံး ကို လေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား ။
အခုကော်နက်ရှင်နဲ့ဆိုရင် ဓါတ်ပုံပိုစ်တစ်ခုတင်ရင် အရင်ကထက်အချိန်နှစ်ဆပေးရတယ်ဗျာ။
မပြည့်မစုံပိုစ်တင်လာရင် ခဏတော့ ထားလိုက် ။
အဲဒီပိုစ်မှာ သူကြီးက၀င်ပြီးစည်းကမ်းချက်ရေးပေးလိုက်ရင် နောက်အဲလို တိုတိုလေးရေးမယ်မထင်တော့ဘူး။
အမှန်ကတော့ ရွာထဲမှာ ပိုစ်တင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရှေ့က အရင်လူတွ ရေးထားတာလေးတွေဖတ်ပြီးမှ သေချာရေးပြီးတင်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ရွာစားပြောထားသလိုပဲ Home page မှာ category ပေါ်အောင် ထည့်ပေးထားရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းစဉ်မှာ အော်တိုပေါ်ရင်ရော…
သတ်ပုံကတော့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မြန်မာစာကို ၀ါသနာပါတော့ မှားနေတာတွေ့ရင် မနေတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျရင်လည်း အဲဒါကိုပဲ ပြောနေဖို့ကို အားနာတယ်။ အမှားများများတွေ့ရင် ပိုအားနာမိတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် သတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တင်ရင်ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေမိတယ်…
MaMa ရေ..အကြံဥာဏ်လေး ပေးပါဦး..